Git Sangit News » काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा, पहिलेको भन्दा कडा हुने ।
काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा, पहिलेको भन्दा कडा हुने ।
काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको समय बढाइएको छ। बुधबार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको समय एक साता बढाउने निर्णय गरेको हो।
‘काठमाडौंमा एक साताका लागि अहिलेको भन्दा कडाइसाथ निषेधाज्ञाको समय बढाइएको छ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुमा बाहेक पहिलेको भन्दा कडा तरिकाले निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।’
मंगलबार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहित स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा निषेधाज्ञालाई बढाउँदै जानुपर्ने राय सुझाव पेश भएको थियो।
‘सबै पक्षबाट निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय आएपछि हामीले समय थप्यौं,’ दाहालले भने। निषेधाज्ञामा पहिलेको जस्तै अत्यावश्यक सेवा खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य चिजहरूलाई सहज गरिने छ। खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पसलहरू सवा ९ बजेसम्म खुल्नेछन्। सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स, कार्डबाहक सवारीसाधनहरूलाई रोकिने छैन।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रशासनले भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
प्रकाशित मिति १० भाद्र २०७७, बुधबार ०६:२४
नेपाल आइपुग्यो नेपालीको आफ्नै रेल,
के तपाईँ कतारमा काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ ? यी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् ।
आजबाट सुरुभयो अधिकमास के गर्न हुन्छ, के गर्न हुदैन। जानिराखौ,
खुसीको खबर ! नेपाली कामदार साउदी प्रवेश गर्न पाउने,
छोराको अनुहार आफू सङ्ग नमिलेपछी श्रीमानले थाले अनुसन्धान, खुल्यो अनौठो रहस्य
टेलिकमको अफर, ५५ रुपैयाँमा तीन दिनसम्म अनलिमिटेड डेटा प्याक
आज देशभर १२४६ जना को’रोना सं’क्रमित थपिए,
आसोज १ गते बिहीबार, आज तपाईंको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल